4K Ciyaartoyda Ultra HD Blu-ray iyo Saxannada - waxaad u baahan tahay wax ka ogaadaan | | BLOG OS-DUKAANKA
February 10, 2018 admin Computer, Life, OS-DUKAANKA, Taageerada OSGEAR, Products, kaydinta, Technology 0
Haddii aad soo iibsatay 4K TV a HD Ultra, Waxa kale oo aad rabto in qaar ka mid ah content 4K si uu u daawado waxa on. content More ee la bixiyo, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah geeyo goobaha sida Netflix, VUDU, iyo Amazon. Isla mar ahaantaana, horyaal iyo aad u badan ayaa la sii daayay 4K Saxannada Ultra-ray Blu HD. Laakiin si ay u ciyaari 4K Saxannada Blu-ray, you’ll have to invest in a 4K Blu-ray Disc player.
Farqiyada u dhexeeya Blu-ray iyo 4K HD Ultra Saxannada Blu-ray >>>
Dhinaca disc ee isla'egta ku, 4K Blu-rays eg 5-inch (12cm) 50GB dual lakabka cajaladood oo jirka loo isticmaalay qaab Blu-ray disc ah, laakiin format 4K Blu-ray disc uu leeyahay awood ah lakabka dual of 66GB iyo lakabka xaafuun awoodda 100GB. 4K calaamadaha video waxaa encoded iyo ku kaydsan cajaladood ee H.265 / format HEVC ah, oo cadaadin karo xogta video 4K galay meesha bannaan ee la heli karo on cajaladood oo ah.
Taas macnaheedu waa in si ay u tuujin kaydinta dheeraad ah oo ku ah HD Blu-ray disc Ultra, video ku kaydsan iyo warbixin maqal ah u leeyihiin in ay wax badan ka yar, taas oo macnaheedu yahay waxay in aan la akhrisan kartaa by ciyaaryahan Heerka Blu-ray cajalid.
Maxaad Format kale cajalid marka waxaan leenahay Streaming >>>
Inkastoo Streaming internet ayaa koray by aadamiga iyo soohdin, weli waa had iyo jeer ma ikhtiyaarka ugu fiican. Tusaale ahaan, si ay u sii qulquli content 4K, aad u baahan tahay xawaaraha broadband ugu yaraan 15Mbps a (talo Netflix ah) iyo, saraaxad, badan oo macaamiishu broadband ma helaan si xawaare sida. Dhab ahaan, xawaaraha broadband ballaaran kala duwan yihiin hareeraha laga xoreeyo dalka ah. ka yar intii 1.5Mbps inay u sarraysaa sida 100Mbps, taas oo macnaheedu yahay in macaamiisha badan oo xitaa ma leeyihiin xawaaraha si qulquli content 1080p, daa 4K. Dabcan, oo ay la socoto helitaanka xawaaraha sare, yimaado qiimaha Times sare.
Arrin kale oo in maskaxda lagu hayo waa in inkastoo helitaanka content internetka waa “on-dalabka,” ma jiraan wax damaanad ah in content sida aad doonayso inaad had iyo jeer waxaa jiri doona. Tusaale ahaan, Netflix si joogto ah daahirsho content waaweyn iyo yar viewed ka soo saarney online, sidaas haddii aadan haysan nuqul jirka ah in uu jecel yahay movie ama TV show, aad maalin maalmaha waxaa laga yaabaa in la soo deristey.
Tan iyo markii inta badan ciyaartoyda cajalid Blu-ray hadda ku daraan Streaming internet, casriyeyn in ciyaaryahanka cajalid 4K Blu-ray ah siin doonaa macaamiisha leh boosteejo ah oo ay u helaan oo keliya ku saabsan dhammaan qaabab disc heli karaa (4K Blu-ray, Blu-ray, DVD, CD) iyo Streaming internet, inkastoo ay jiraan tiro ka mid ah doorashada ee-dhamaadka sare HD Ultra Blu-ray ciyaartoyda disc aan u dhisay-in Streaming internet, qaadashada hab marketing in helitaanka telefishinada Smart iyo streamers warbaahinta dibadda ka dhigi siyaado ah habkaani.
Haddaad tihiin kuwo dooni ciyaaryahan in sidoo kale lagu daro awoodda Streaming internet, hubiyo habkaani hor inta aadan gadan.
Sida loo aqoonsado 4K Blu-Ray cajalid iyo Drive >>>
4Saxannada K Blu-Ray leeyihiin 4K Logo dushiisa ; 4K Drive ama ciyaaryahan kale oo ay leeyihiin Logo UHD, waxaa loola jeedaa HD Ultra. Dooro drive iyo disc inuu ku biiro 4K video saxda ah.
Warbixin dheeraad ah Blu-Ray, riix halkan.
Software Ujeeddo Dadweynaha Graphics HD Technology OS-DUKAANKA Samsung Telefoonka gacanta taageero darawalka processor HTC Taageerada Driver Taxanaha Tababaraha qalab processor fasiraad sharci ah Intel 64-Windows yara Processor Model Device Nokia Technology_Internet
processor Sony Ericsson Telefoonka gacanta Technology Samsung processor Technology_Internet Samsung Galaxy Model Device Processor taageero darawalka Ujeeddo Dadweynaha Nokia Graphics HD Taageerada Driver Taxanaha OS-DUKAANKA HTC Server Intel Qualcomm Tababaraha qalab casriga ah 64-Windows yara Software Intel fasiraad sharci ah